ခုဇ္ဇုတ္တရာနှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ – ဝင်းမေတ္တာ
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၆) – ရှင်နေလျှက်သေသူ နှင့် သေနေလျှက်ရှင်သူ
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၃) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၆) ရှင်နေလျှက်သေသူ နှင့် သေနေလျှက်ရှင်သူ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၅) – ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း (၄)ချက်
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၂) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၅) ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း (၄)ချက် ၁။ ဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့် ခါးကုန်းမလေးဖြစ်ရပါသလဲ။ ၂။ ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့် တိပိဋကဓရ ဉာဏ်ပညာကြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသလဲ။ ၃။ ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့် သောတာပန်ဖြစ်ရပါသလဲ။ ၄။ ဘယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့် သူများအခိုင်းအစေဖြစ်ရပါသလဲ။ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၄) – ခုဇ္ဇုတ္တရာ မီးဘေးထဲမှာ ပါသွားသလား?
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၁) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၄) ခုဇ္ဇုတ္တရာ မီးဘေးထဲမှာ ပါသွားသလား? အကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးချိန်ရောက်လာလျှင် အကုသိုလ်ဆိုတာ ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားလေ အပြစ်ကြီးလေ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၃) – ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ကိုယ်သာခံ
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄၀) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၃) ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ကိုယ်သာခံ ဥတေနသုတ် (ဥဒါန၊ ၁၇၆) နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၂) – မေတ္တာအားကောင်း သူတော်ကောင်း
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၉) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၂) အရိယာဖြစ်လျှင် သီလစင်ကြယ် မေတ္တာအားကောင်း သူတော်ကောင်း သူတော်ကောင်းဟူသည် နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၁) – ခုဇ္ဇုတ္တရာကို ဗဟုဿုတဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်ပေးခြင်း
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၈) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၁) ခုဇ္ဇုတ္တရာကို ဗဟုဿုတဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်ပေးခြင်း သာမာဝတီ နှင့် မောင်းမ (၅၀၀)တို့ ဗုဒ္ဓကိုခက်ခဲစွာဖူးမြင်ကြခြင်း ဗုဒ္ဓကို အကြောင်းပြု၍ သာမာဝတီအပေါ်မှာ မာဂဏ္ဍီရန်ငြိုးထားခြင်း မာဂဏ္ဍီက လူဆိုးများကို ငွေပေး၍ ဗုဒ္ဓကို ဆဲခိုင်းခြင်း နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၁၀) – ခုဇ္ဇုတ္တရာသောတပန်ဖြစ်ခြင်း
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၇) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၁၀) ပန်းသည် ဆွမ်းကပ်ခွင့် တောင်းယူခြင်း၊ ခုဇ္ဇုတ္တရာသောတပန်ဖြစ်ခြင်း နှင့် တိပိဋကဓရ ဖြစ်ခြင်း ခုဇ္ဇုတ္တရာ ဟောသည့် ဣတိဝုတ်ပါဠိ နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads
ခုဇ္ဇုတ္တရာ (၉) – ဥပုသ် စောင့်ရခြင်းအကျိုး
တရား လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃၆) ဗဟုဿုတအရာ ဧတဒဂ်ရသော ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် ဆက်စပ်သောတရားတော်များ(၉) ဥပုသ် စောင့်ရခြင်းအကျိုး ဃောသကသူဋ္ဌေး၊ ကုက္ကုဋသူဋ္ဌေး၊ ပါဝါရိကသူဋ္ဌေး တို့ သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း နံနက် သီလခံယူ + ဘုရားဝတ်ပြု + အလုပ်ပေးတရား နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads